Manoratra amin'ny tatoazy, manao ahoana izy ireo? Fomban'ny tatoazy 16 azo sintonina | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Nohavaozina tamin'ny 06/09/2019 17:47 | maro
Betsaka ny litera ho an'ny tatoazy, ary handeha hanafatra izahay anio hanehoana anao ny tena manaitra indrindra ary izany dia afaka mitarika ho an'ny tatoazy izay nanirianao hanasongadinana fehezanteny manaitra na teny manentana fanahy izay misy ifandraisany amin'ny olonao na zava-mitranga iray manan-danja indrindra amin'ny hoavinao.
Ankoatra ny manome anao torohevitra vitsivitsy hampiasa taratasy ho an'ny tatoazy, dia mandeha koa izahay hampianatra anao ny karazan-taratasy isan-karazany amin'ny tatoazy azonao ampiasaina mba hahafahanao manapa-kevitra tsara hoe iza no ho farany. Avy amin'ireo izay manify, ireo ho an'ny electrocardiograms na ireo mifamatotra izay mety ho lavorary miaraka amin'ny tatoazy hafa izay nataonao vao haingana. Hanao izany isika mba hisafidianana tsara kokoa ilay tatoazy izay hitazona ny hoditsika mandritra ny taona maro.
1 Ahoana no tokony ho taratasy ho an'ny tatoazy
1.1 Torohevitra hafa
2 Karazan-taratasy ho an'ny tombokavatsa
2.2 Ho an'ny electrocardiogram
2.4 Ho an'ny tatoazy kely
3 Taratasy tsara indrindra ho an'ny tatoazy
3.1 Ranomaso anjely
3.2 Tattoo Angilla
3.3 taratasy mainty
3.5 Mangidia amin'ny hena
3.6 Gangsta tany am-boalohany
3.7 Tattoo ranomainty
3.8 Rto Love Tatto
3.11 Eo akaikinao foana ny endri-tsoratra
3.15 Tatoazy Rose
3.16 Fotom-pitiavana tena izy
Ahoana no tokony ho taratasy ho an'ny tatoazy
Voalohany indrindra, tsy maintsy lazaina izany Tsy ho an'ny rehetra ny taratasy. Mila manokana fotoana hikarohana ireo karazana litera ho an'ny tatoazy tsara ianao ary hahitana hoe iza no tsara indrindra amin'ity sehatra ity. Androany koa isika dia manana Instagram ho loharanom-pahalalana tsy mety ritra ary ahafahantsika mitarika ny tenantsika hahita ilay tatoazy taratasy tsara ho an'ny filantsika sy ny faniriantsika.
Torohevitra iray lehibe hafa koa ny taratasy ho an'ny tatoazy dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fahatsapana mitovy tatoazy Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tatoazy litera dia mila maneho ny fahatsapanao ny tatoazy. Ny endritsoratra mety dia hahatratra an'io vokatra io ary ny ambiny dia ny fahalalana ny fomba hisafidianana tsara. Ary tsy tokony hoentin'ny firavaka taratasy koa ianao.
Lazainay izany satria haingo be loatra manjary mazava ny taratasin'ilay taratasy ary amin'ny farany azonao atao ny mamaky azy tsy araka ny tokony ho izy. Zava-dehibe tokoa fa ny litera amin'ny tatoazy dia tokony ho hita mazava tsara sy azo zahana. Ny teboka iray hafa tokony hodinihina dia ireo litera izay hofidintsika izay manana ny rafitra fototra ilaina ho azo vakina.
Izany hoe, ny fanononana ary ny soratra tonga lafatra Ny tatoazy dia tokony ho teboka mandatory iray hafa. Na dia azo takarina aza fa amin'izao fotoana izao dia tsy hanao fahadisoana amin'ny sora-tànana ny artista tatoazy.
Tsy azontsika atao koa ny tsy miraharaha ny haben'ny litera ho an'ny tatoazy. Tahaka ny tatoazy tsara rehetra dia mila ny taratasiny ianao hibodo ny faritra amin'ny vatana izay hisy azy. Raha mandray ny ambony ambony isika dia tsy maintsy handray feno sakan'ny a scapula mandra-pahatongan'ny iray hafa. Ny habe kely kokoa dia mety hampisavorovoro ary tsy hanome izany hery rehetra izany raha ny font na ny typeface no mandray tsara ireo toerana ireo.
Ary rehefa efa nisafidy ny volavolanao ho an'ny tatoazy ianao, dia ataovy foana mangataha torohevitra amin'ny artista. Raha matihanina izy dia ho fantany ny fomba hanomezana torohevitra anao tsara momba ny karazana tatoazy, ny habe ary ny toerana hametrahana azy. Ary foana, mandania ny fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao hitenenana. Toy ny zava-drehetra amin'ny fiainana, ny zavatra maika sy haingana dia tsy mandeha tsara matetika.
Farany, amin'izao andro izao dia manana ianao ny mety hijerena ny portfolio-n'ny artista tato amin'ny Internet amin'ny kaontinao rehetra. Raha mankany amin'ny magazay ara-batana ianao dia hanana karatra izany. Angataho izy ireo amin'izany ary diniho tsara ny asan'izy ireo sy ny heviny azony amin'ny tambajotra sosialy. Ho tsapanao haingana hoe iza no eo alohanao hampitony anao ary hamela ny tenanao ho eo am-pelatanan'izy ireo tsara. Ary matetika, raha manam-bola ianao, dia afaka mitady ny tsara indrindra amin'ny taratasy manokana mba hangataka ny tolotr'izy ireo ary hiasa amin'izany tatoazy taratasin'ny matihanina tsara indrindra izany. Androany dia misy niches maro eny an-tsena, ary amin'ny tsenan'ny tatoazy dia mitovy ihany ny zavatra mitranga.
Aza atao kely loatra. Mila ny habakao ianao. Eritrereto fa rehefa mandeha ny fotoana dia tsy hanana tanjaka intsony ny ranomainty ary raha ataonao kely dia afaka mifangaro sy very ilay fahazavana tadiavintsika. Ka alao antoka fa ny habeny mety ka tsy hanimba azy ny fotoana; Eto izahay dia mamporisika anao hangataka fanampiana amin'ny mpanaingo tatoazy amin'ny toerana sy ny haben'ny taratasy.
Raha hametraka ianao tsipika manipika ny litera amin'ny tatoazy, mafy orina sy voafaritra tsara izany. Io no fomba tokana hitazomana azy ara-potoana.
Karazan-taratasy ho an'ny tombokavatsa
Mila mihevitra ny tenantsika ho matotra isika ny fomban'ny taratasy ho an'ny tatoazy, satria mora ny mianjera amin'ny fomba manokana noho ny fahitana azy. Fa toy ny endritsoratra typographique, ny typeface tsirairay dia ampifandraisina amin'ny dikany ifandraisany amin'ny olona. Ohatra, misy calligraphy gothika na script sasany mifandray amin'ireo tarika. Tsy milaza izahay fa tsy afaka mitondra azy ireo ianao, fa fantatrao izay hiatrehanao izany.
Ny anarany mihitsy no manondro ny fahamendrehan'ny taratasy ka azo vakiana tanteraka. Tonga lafatra ho an'ny tatoazy kely, na dia ho an'ny habe lehibe kokoa aza dia mora ampiasaina izy io. Hitanay ireo kintana ireo, ireo volana mety indrindra. Matetika izy ireo dia any amin'ny toerana izay zara raha misy fahitana raha vao jerena.
Ho an'ny electrocardiogram
Ity karazana endritsoratra tatoazy ity dia miavaka amin'izany Mifarana ny tsipika EKG amin'ny anaran'ny malalantsika na io andian-teny mety indrindra hanehoana fotoana manan-danja amin'ny fiainantsika.
Ny voalohan'ny anaran'ny mpivady azo ampifandraisina amin'ity karazana ity ny tatoazy tena misy dikany sy ara-potoana. Ny marina dia misy karazany marobe amin'izy ireo ary tena tany am-boalohany. Avy amin'ny iray misy zana-tsipika sy ny anaran'ny malalany ary ny iray hafa miaraka amin'ny zana-tsipika sy ny anaran'ilay malala. Ny iray amin'ireo hatsaram-panahin'ity karazana tatoazy amin'ny litera ity dia ny tsy mila habaka be toy ny karazana litera hafa.
Ho an'ny tatoazy kely
Tatoazy kely ho an'ny hatoka, ny hatotan-tanana na afenina ao amin'ny kitrokely ly izay miavaka amin'ny pirinty kely koa. Ny tena mahatsikaiky dia ny "tsiky" toa izao: sm :) e.
Ny gothic dia manana besinimaro be foana ary tononkira kanto izay mampiavaka azy ireo mifangaro endrika sy io teboka maizina manome azy io.
Taratasy tsara indrindra ho an'ny tatoazy
Ity fomba fanoratana tatoazy ity dia miavaka amin'ny fijerena ranomainty. Lss endrika bika somary matevina izy ireona dia manana finer finer aza izy ireo mba ho lamaody tsara. Fongano kilasika izay tsy dia voamariky akory mba ho ilay litera voafidy farany.
Rohy mankamin'ny tranonkala: marary mitsika
Endritsoratra manaitra iray hafa momba ny lanjany ary misy t izanyoaka manokana ho faritana toy ny sokajy. Endritsoratra be pitsiny izay tsy dia vehivavy loatra ary azo zahana tsara raha vao jerena. Ity endritsoratra ity dia misy litera kely sy mari-tsoratra ilaina amin'ny tatoazy.
Ity taratasy ity dia faritan'ny maranitra be ny serifany, miaraka amin'ny tsipika matevina sy ny mikasika ny sekoly taloha izay tsy mamela ny olona tsy hiraharaha. Izy io dia azo jerena amin'ny endriny misy anao sy ny endriny alokaloka. Loharano misy tanjaka.
Ity typeface ity dia miavaka noho ny hazo fijaliana isan-karazany, fo, lakile sy ny maro hafa izay mandrakotra. Tena mety ny miaraka aminy amin'ny iray hafa ary noho izany dia ampiasao ireo marika ilaina mba hananan'ny tatoazy hery bebe kokoa.
Mangidia amin'ny hena
Ity dia mety ho ny typeface manakaiky kokoa ny zavatra rehetra takianay amin'ny sora-tanana ho an'ny tatoazy. Endritsoratra iray izay mitondra fahatsiarovana an'ireo tatoazy ireo tamin'ny vanim-potoana hafa ary lasa endrika fanoratana iray manontolo hanome aingam-panahy sy hampiasaina.
Gangsta tany am-boalohany
Miatrika typeface isika manaitra ny fahatsiarovana ny maro amin'ireo rakikira mozika hip hop tamin'ny taona 90. Miaraka amina fomba tena hafahafa izay afaka mampatsiahy antsika amin'ny maha "baddest" antsika; Efa niresaka momba ny dikan'ny fanaovana tatoazy amam-bika toy izao isika teo aloha.
Endritsoratra quirky hafa ary manaitra amin'ny fanaovana tahaka izany tatoazy "fitiavan-dreny" izany. Taratasy sahisahy feno fotsifotsy amin'ny ampahany. Ny sora-baventy dia misy karazany roa miaraka amin'ny karazana padding amin'ny endritsoratra.
Rto Love Tatto
Loharano mitokona noho ny tsy fahita firy ary izy io dia rivotra madio raha oharina amin'ny ambiny.
Endritsoratra miloko, fa manana endrika tsara noho ny fiolahana ary ireo firavaka ilaina hamoronana ilay fahatsapana fa nosintonina tamin'ny penina izy io.
Io no endritsoratra manokana indrindra ho an'ny rehetra ireo fanamarihana foko ireo izay mitafy ny litera tsirairay amin'ity typeface ity.
Eo akaikinao foana ny endri-tsoratra
Fomban-tsoratry ny calligraphy miaraka amin'i miolakolaka misokatra ary famaranana saika tsy manam-petra ho iray amin'ireo kilasika amin'ity lisitra ity.
Iray amin'ny ny endritsoratra tsara indrindra ho an'ny litera lisitra tatoazy. Tena ilaina.
Ahoana no tsy nametrahantsika endri-tsoratra miorina amin'ny tantsambo? Eto isika dia manana izany amin'ireo habaka famenoana banga sy fahatokisan-tena izay asehony hatramin'ny fotoana voalohany.
Loharano antholojika nataon'i ny dikany sy ny fombany mahafinaritra. Tsy hiteny intsony.
Misy famaranana toa raha mitsonika ny ranomainty amin'ny litera mitovy.
Fotom-pitiavana tena izy
Nolazainy tamin'ny azy izany rehetra izany dikany manokana amin'ny endritsoratra matevina, na dia tsara aza ny faritra ambony sy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Taratasy ho an'ny tatoazy
tsy misy rohy fampidinana mandeha
Voavaha sahady. Miarahaba anao!
Tian'ny Amazon ianao handoa tsotra izao amin'ny tananao